Loharano 20 maimaim-poana ho an'ny andron'ny mpifankatia | Famoronana an-tserasera
Loharano 20 maimaimpoana ho an'ny Andron'ny mpifankatia
Ny Andron'ny mpifankatia dia andro lavorary ho an'ny marketing ary amin'ny famolavolana vokatra sy famoronana mahaliana. Ny antso dia atao amin'ny fitiavana amin'ny endriny voalohany indrindra ary natao hanakorontanana ny fahatsapana dimy an'ny mpijery hanentanana azy fihinanana fandraisana ny fahatsapana ho toy ny fialan-tsiny. Ny loko mafana, vehivavy ary marefo dia misongadina indrindra. Ny momba izany dia ny manasongadina ireo toetra toy ny fahatsapana, fanakaikezana ary halemem-panahy.
Misy fomba maro samihafa hanatonana ireo zavatra noforoninay ary hiankina amin'ny karazana orinasa, mpanjifa ary salantsalotra izay haseho ny fahariana antsika. Misy sehatr'asa mahafinaritra izay azontsika ampiasaina hampivelarana ireo hevitra mahaliana indrindra. Manomboka amin'ny kitikitihana zaza sy tsy manan-tsiny ka hatrany amin'ny erotika, mpandika lalàna ary mahery setra kokoa. Ho fanampin'izany, ny asantsika dia mety mirona any amin'ny bebe kokoa minimalist ary fisaka (soso-kevitra tena tsara raha handeha hiasa amin'ny famoronana misy fanohanana nomerika isika) na ny mifanohitra amin'izay lehibe indrindra tsy dia be skema, na dia baroque aza ary izany dia maneho ny hafatray amin'ny antsipiriany sy nuansa be dia be.
Mba hanomezana aingam-panahy anao sy hanomezana anao loharano azo ampiharina sy manintona, anio aho hamela anao hisafidy entana avo lenta maimaimpoana ary alaina avy amin'ny Freepik. Anisan'izy ireo no ahitantsika karatra, sidina, lahatsoratra, sary masina ary singa vita amin'ny vector. Raha manana olana amin'ireo rohy ianao dia mila miteny amiko fotsiny ianao, tadidio fa tsy maintsy mandika ireo rohy ao amin'ny bara fitetezamanao ianao hidirana amin'izy ireo.
Ankafizo izy ireo!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » Cartoon vector » Loharano 20 maimaimpoana ho an'ny Andron'ny mpifankatia
+ Endritsoratra matihanina + 100 ho an'ny famolavolana tranonkala maimaim-poana (II)
Ny fanangonana sary hosodoko tsy manaja nataon'i James Franco